Ubomi Obuza Kunanditshwa - Khetha Uphawu
Ubomi Obuza Kunanditshwa
Ayisiyo kuphela indibaniselwano ye IVenus kwaye Neptune kumqondiso we IiPisces , kodwa kwakhona simele sisivume isibakala sokuba Jupiter ngoku iphakamisa iNeptune ukusuka Aquarius , ezenza isikhokelo sasemhlabeni esisingise kwinyaniso yokugqibela. Eli liphupha lobuthixo xa imibono emininzi kunye namabali othando anokuthi atyhileke, kungekuphela nje ezingqondweni zethu kodwa nakwilizwe lokwenyani. I-Materialization iza ngexesha layo lendalo, ngeempawu ze isiqalelo soMhlaba . Ikhawulwe ngu Pluto kwi Capricorn xa silungile, xa sijongene nokulahlekelwa kwethu, xa sisebenzise iimvakalelo zethu ngokulungileyo, xa siphilisiwe. Ngokuqinisekileyo iza ngokumangalisayo Uranus kwi Taurus , esinceda soyise xa siye sanembopheleleko saza sakhetha ikhondo lenkululeko yobuqu yokwenyaniso, kunokuba sizifihle nje kwiintlungu.
Ngaba Eyona Ifanelekileyo Inokuba Yinyaniso Yethu?
Njengoko kufanelekile njengoko esi sidibaniso sinokubonakala, akukho lula. Uphawu lweePisces luthwala zonke iinkumbulo zookhokho kunye nobudlelwane bomzwelo, ngelixa iVenus apha isoloko ifunyenwe ukuba i-Sleeping Beauty engazange ibonwe, ifihliweyo, i-enchanted okanye ityhefu. Apha, lonke ulwalamano oluyityhefu ludala isiphithiphithi esiza kubanjiswa, kanye njengokuba uthando olufanelekileyo luvutha phezulu ukuze lubonise ukuba kukho indlela engcono evela kuleyo engazange isenze sonwabe. Ukuba udakumbile, uxinezelekile, udakumbile okanye awanelisekanga, thabatha ukholo lwakho kwaye ubone apho uya kuhlala khona kwinkqubo. Ukudakumba kuthetha kuphela ukuba ulungele utshintsho olucokisekileyo, njengoko unikezela kwizibophelelo zeenkolelo ezingalunganga kwaye ubone uMphefumlo wakho uzama ukufikelela kwinto exabiseke ngokwenene kwiSiqu sakho sokomoya. Asikokuzingca ukuzenza wonwabe.
I isiqalelo soMlilo ayisebenzi ncam kwaye ityelelwe ngamaqumrhu asezulwini kule mihla, ngoko ke asinakuyibona inkanuko eqhelekileyo uVenus athanda ukuyibonakalisa xa idityaniswe neenkumbulo zeemvakalelo ezinzulu. Intshukumo ibonakala ngathi iyaphoswa kwaye ngelixa izinto ezininzi zinokujikeleza ezintloko zethu, inyathelo lokuqala linokusilela njengoko sithandabuza ugwebo lwethu kunye neemvakalelo zethu zangoku, sizijonga ukuba zinyanisekile kwaye sifumana undoqo wenyaniso esingakwazanga ukuyibona. Oku kungabeka ubudlelwane obuninzi kuvavanyo, ngelixa kuvusa iimvakalelo ezithambileyo ezifuna ixesha lokukhula, kusondeza abathandanayo, kwaye kusenze sizibuze ukuba iitalente zethu zibonakaliswe ngokuyilayo kubomi bethu bobugcisa. Nangona imfezeko isekude, siyakwaneliseka ngokungaphantsi kakhulu kunokugqibelela xa siphumle kwaye sonwabele indlela elungileyo esiyikhethileyo ekuzingeleni, kwiimvakalelo, kuxhomekeke kwindlela umntwana wethu wangaphakathi awayeziva ngayo.
Yenza into encinci okanye wenze into enkulu
Uninzi lwethu luya kucelwa umngeni lulwandle olukhulu lweemvakalelo, iminqweno ayisayi kuphela, kunye neemvakalelo eziphuma ngokulula kulawulo. Abanye abayi kubona iimfuno zabo kwi-mush yolwazi abalufumana kwabanye abantu. Unxibelelwano lusenokuwenza mnyama umfanekiso ukuba awuzazi zonke iimvakalelo ezizisa kuwe kwaye ezinye zifuna ixesha lokubonisa imibala yazo yokwenyani. Iingxoxo nabantu esibakhathaleleyo zinokusishiya sididekile, kuphela nje ukuba siqonde emva kokuba iintsuku sele zidlulile, ukuba siye saziva sibi xa besiva bethetha, sibambe indawo yethu singaqondwanga, kwaye asizange siphakame ukuze sizikhusele njengoko singazange siyibone inyaniso engokweemvakalelo. eza kuqala. Xa sijamelene neemvakalelo ezinjalo, kubalulekile ukuba singanikezeli ekubek’ ityala okanye simbek’ ityala loo mntu phambi kwethu. Endaweni yoko, kufuneka sizibuze ukuba yintoni esiyidinga ngokwenene kwaye inokufunyanwa phi ukuba ayikho kubafowunelwa ebesibambelele kubo.
Izinto ebomini bethu akufuneki zibe nkulu ukuze sizinandiphe. Yongeza umbala kwindawo okungqongileyo, uhombise ngokutsha, uthenge impahla entsha kwaye ukhangele Wena ophulukene nayo endleleni. Iingceba zentliziyo zinokuphiliswa kwaye zilungiswe kwakhona, kodwa kuphela ukuba sizilungiselele ukuntywila kwaye sive nantoni na efunekayo ukuze sicocwe kwaye sikhululwe kwindlela yethu eya enkululekweni. Abantu ebesikhe sacinga ukuba ngamaqabane ethu omphefumlo banokubuya bazosixhaphaza, kungekuphela nje kumaphupha ethu kodwa ngonxibelelwano lokwenyani lwasemhlabeni kunye namaqhina. Ilahleko yexesha elidlulileyo kufuneka yamkelwe kwaye iqwalaselwe, njengoko siphuma kwiindima zethu zobuntwana, iimpahla ezingasasifanelanga, kunye neembono ezinqwenelekayo ezinike abanye amandla phezu kwentlalontle yethu. Nangona ingabonwa okokuqala ngephanyazo, eli lixesha apho sinethuba elifanelekileyo lokuzikhusela, iseti yethu yobuqu yemilinganiselo kwaye sibone indlela esilufanelekele ngayo uthando esilulangazelela yonke imihla.
Umfanekiso woThando oluNgcwele unokubonakala umkhulu kwaye usemoyeni kakhulu, kodwa eyona nto ibaluleke ngokwenene kule mihla kukuzaliseka koko sinokukufumana ngokuzenzekelayo, ngolonwabo, sinxibe uncumo ebusweni bethu yonke imihla esiyichitha siphila kanye apha, kwisijikelezi-langa sethu esingafezekanga. .
Itaurus Iponti Leo Aries Ngena